လူကြီးမင်း၏ လက်လီအရောင်းဆိုင်အတွက် အကောင်းဆုံး POS Software ကို မည်သို့ရွေးချယ်မည်နည်း? - Vanguard
Home » လူကြီးမင်း၏ လက်လီအရောင်းဆိုင်အတွက် အကောင်းဆုံး POS Software ကို မည်သို့ရွေးချယ်မည်နည်း?
Posted by Vanguard on January 7, 2021 .
လက်လီအရောင်းကုမ္ပဏီများသည် မှန်ကန်သော လက်လီရောင်းဝယ်ခြင်းစနစ် (POS) က ၎င်းတို့အား ပြိုင်ဆိုင်မှုနယ်ပယ်၌ နှာတစ်ဖျားသာစေနိုင်သည်ကို သဘောပေါက်ကြပြီး POS စနစ်ကို ငွေသိမ်းစက်အနေဖြင့်ထက် ပိုမို၍အသုံးချနိုင်သည်ကို နားလည်ကြသည်။ ၎င်းကို ပစ္စည်းစာရင်းပြုစုခြင်းဆိုင်ရာ၊ အလုပ်သမားဆိုင်ရာ၊ ပုံမှန်စားသုံးသူများအား လက်ဆောင်ပေးခြင်း အစီအစဉ်များနှင့် စားသုံးသူဆက်ဆံရေး စီမံခန့်ခွဲမှုတို့အတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုဗဟိုချက်အနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ စားသုံးသူများကို တစ်ဦးချင်းစီ၏ လိုအပ်မှုအလိုက် ထိရောက်စွာ ဝန်ဆောင်မှုပေး၍ အကြိုက်တွေ့စေရန် လိုအပ်သော နည်းကိရိယာများကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အောင်မြင်သော လက်လီရောင်းချသူများသည် ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အကောင်းဆုံး POS စနစ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်မှုတွင် အသာစီးရယူကြပါသည်။
လူကြီးမင်း၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်များ စီမံခြင်း (ERP) သည် လူကြီးမင်း၏ online နှင့် offline ပေါင်းစပ်လုပ်ကိုင်သည့် လက်လီရောင်းချမှု မဟာဗျူဟာအတွက် မရှိမဖြစ် အရေးပါသည်။ စားသုံးသူများသည် ဝယ်ယူမှုလမ်းကြောင်း တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ ပြောင်းရွှေ့ရွေးချယ်ရာတွင် လူကြီးမင်း၏ စားသုံးသူများ အလိုရှိသည့် လွယ်ကူမြန်ဆန်ပြီး တစ်သမတ်တည်း ကောင်းမွန်မှုရှိသော ဝယ်ယူမှုအတွေ့အကြုံများကို ပေးစွမ်းနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို စီမံပေးသည်။ လူကြီးမင်း၏ လက်လီအရောင်းကုမ္ပဏီတွင်online နှင့် offline ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်သည့် လက်လီရောင်းချမှုကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် POS စနစ်နှင့် ERP စနစ်ကို ချောမွေ့စွာ ပေါင်းစည်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ လက်လီအရောင်းသမားများသည် ERP အမျိုးမျိုးနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော POS စနစ်များကို ရှာဖွေကြသည်။ လက်လီလုပ်ငန်းကဏ္ဍ လျင်မြန်စွာ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးလာသည် နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲမှုကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် အပျက်အစီးအဆုံးအရှုံး အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် မည်သို့စီမံရမည်ကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီး သတိကြီးကြီးနေထိုင်ခြင်းက ပါးနပ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
တိုးချဲ့နိုင်သော POS စနစ်အား ရွေးချယ်ခြင်းသည် လျင်မြန်ဖြတ်လတ်မှုနှင့် အပြောင်းအလဲကို တုံ့ပြန်မှု ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် နောက်ထပ် နည်းလမ်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ တိုးချဲ့နိုင်စွမ်းဆိုသည်မှာ ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာများအနေဖြင့် POS စနစ်ကို အစမှပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရန် မလိုအပ်ဘဲ ၎င်း၏ စွမ်းရည်များကို တိုးချဲ့နိုင်စေရန်အတွက် ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။ Artificial intelligence – AI ပုံရိပ်ဖတ်စနစ်ကို အသုံးပြု၍ ဈေးဝယ်ခြင်းနှင့် အလိုအလျောက်ငွေပေးချေခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည့် ကွန်ပြူတာဈေးဝယ်လက်ထောက်နှင့်ပတ်သက်၍ လူအများ သတိထားမိပြီး လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှ ပါးနပ်သော လက်လီအရောင်းဆိုင်များသည် အရာအားလုံးအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည့် POS စနစ်များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာကြသည်။
မည်သူမဆို မွမ်းမံအသုံးပြုနိုင်သည့် Open Platform
အချို့သော POS စနစ်များတွင် မည်သူမဆို မွမ်းမံအသုံးပြုနိုင်သည့် API များ ပါရှိသည်။ Developer များသည် ၎င်း API များမှတစ်ဆင့် ၎င်းတို့၏ hardware နှင့် software ဖြေရှင်းချက်များကို POS စနစ်နှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအောက်မှ Platform များရှိ POS စနစ်များသည် ဆော့ဖ်ဝဲ developer များအဖို့ ကိုင်တွယ်ရန် ပိုခက်ခဲသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ၎င်းတို့နှင့် ပေါင်းစပ်သော ဖြေရှင်းချက်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် အနည်းနှင့်အများ အကန့်အသတ်ရှိကြောင်း တွေ့နိုင်သည်။ အောင်မြင်သော လက်လီဈေးကွက်သမားများသည် ၎င်းတို့၏ ရွေးချယ်မှုများကို များနိုင်သမျှ များအောင်ထားရှိသည်။
ထိပ်တန်း လက်လီအရောင်းဆိုင်များက POS စနစ်သည် အလွယ်တကူ တိုင်းတာချိန်ညှိနိုင်သည်ဟု အခိုင်အမာ ဆိုထားသည်။ လက်လီရောင်းချသူသည် ကပ်လျက်မြို့တွင်ဖြစ်စေ၊ ကမ္ဘာတစ်ဘက်ခြမ်းတွင်ဖြစ်စေ စတိုးဆိုင်အသစ်တစ်ဆိုင်ဖွင့်လျှင် POS စနစ်သည် ထိုသို့တိုးပွားလာမှုအတွက် အချက်အလက်ဖြည့်သွင်းနိုင်ပြီး နေရာအားလုံးရှိ POS လမ်းကြောင်းအားလုံးကို dashboard တစ်ခုတည်းမှ ထိရောက်တိကျစွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်း ရှိသင့်သည်။
လူကြီးမင်း၏ POS စနစ်သည် ရုံးချုပ်နှင့် ဆိုင်တွင်း စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် အထောက်အကူဖြစ်သင့်သည်။ ၎င်းသည် ကုန်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူဖြည့်တင်းခြင်းနှင့် ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းအတွက် လူကြီးမင်းလိုအပ်သည့် ကုန်စာရင်းစစ်တမ်းနှင့် အရောင်းအဝယ်များဆိုင်ရာ မြင်သာမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သင့်သည်။ လူကြီးမင်း၏ ERP စနစ်နှင့် ပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့် လမ်းကြောင်းများနှင့် တည်နေရာအားလုံးရှိ ကုန်ပစ္စည်းများကို တစ်နေရာတည်းမှ စာရင်းစီမံခန့်ခွဲရန် ရွေးချယ်နိုင်သောကြောင့် ငွေကုန်ကြေးကျများခြင်းနှင့် ပစ္စည်းလက်ကျန်မရှိတော့သော ပစ္စည်းများကြောင့် ရောင်းအားဆုံးရှုံးခြင်းကို အတတ်နိုင်ဆုံး လျှော့ချနိုင်စေသည်။ ၎င်းသည် စတိုးဆိုင်မှ ပစ္စည်းပို့ဆောင်သည့် ဆောင်ရွက်ချက်ကိုပင် ပံ့ပိုးနိုင်သည်။
ထိပ်တန်း လက်လီအရောင်းဆိုင်များသည် အလုပ်သို့ ရောက်ရှိ၊ထွက်ခွာချိန် မှတ်သားခြင်းနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်ခြင်းကဲ့သို့သော ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများကို ၎င်းတို့၏ POS စနစ်များအား အသုံးချ လုပ်ဆောင်နေသောကြောင့် မန်နေဂျာများအနေဖြင့် ဝင်ငွေတိုးစေသည့် လုပ်ငန်းများ ပိုမိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အချိန်ပိုမိုရရှိသည်။
ထိပ်တန်း လက်လီအရောင်းဆိုင်များ အသုံးပြုသော ဤ POS စနစ်စာရင်းတွင် ပါဝင်သည့် ပထမဆုံး လုပ်ဆောင်ချက်ငါးခုသည် စားသုံးသူများ ကောင်းမွန်သော ဝယ်ယူမှုအတွေ့အကြုံ ရရှိစေရန်နှင့် စားသုံးသူများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို အထောက်အကူပြုသည်။ သို့ရာတွင် POS စနစ် software ကို ထိုအချက်များအား အလွယ်တကူ ရရှိရန် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသင့်သည်။ အရောင်းစာရေးများအနေဖြင့် လျင်မြန်စွာ သင်ယူနိုင်ပြီး တိကျမှန်ကန်စွာ အသုံးပြု၍ စားသုံးသူအား မြန်ဆန် ထိရောက်သော ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်အလို့ငှာ POS စနစ်တွင် လုပ်ဆောင်ချက်များ ရှင်းလင်းလွယ်ကူစွာ ရှာဖွေနိုင်သည့် user screen များ ထည့်သွင်းရေးဆွဲပေးရန် တောင်းဆိုပါ။ ဈေးဝယ်သူများ၏ အစဉ်အဆက်အားပေးမှုကို ရရှိစေရန်အလို့ငှာ အကောင်းမွန်ဆုံးနှင့် တစ်ဦးချင်းစီ၏ လိုအပ်မှုအလိုက် ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် စားသုံးသူအချက်အလက်များ၊ ဈေးဝယ်မှတ်တမ်းနှင့် ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်များအပါအဝင် အရောင်းစာရေးတစ်ယောက် လိုအပ်သည့် အရာအားလုံး ၎င်းတို့၏ လက်တစ်ဖျားတွင် ရောက်ရှိနေစေရန်အတွက် ယင်းတို့အား POS စနစ်တွင် မပျက်မကွက် ထည့်သွင်းပါ။
အောင်မြင်သော လက်လီအရောင်းဆိုင်များသည် နောက်ဆုံးပေါ် အဆင့်မြင့် POS ဆော့ဖ်ဝဲများ အပါအဝင် ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ထိပ်ဆုံးနေရာတွင် မြဲမြံစွာရပ်တည်နိုင်စေရန် ကူညီပေးနိုင်သည့် ခေတ်မီနည်းလမ်းများဖြင့် အားဖြည့်ထားသောကြောင့် အောင်မြင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ လူကြီးမင်း၏ POS စနစ်သည် လူကြီးမင်း၏ စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုအတွက် မည်မျှအတိုင်းအတာအထိ အထောက်အကူပြုပါသနည်း။
အောင်မြင်သော လက်လီစီးပွားရေးဆိုသည် အလိုလိုဖြစ်ထွန်းလာခြင်း မဟုတ်ပါ၊ ကြိုးစားဖော်ဆောင်ထားရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။